မတူကွဲပြားမှုတွေကို ပေါင်းစည်းပြီး အင်အားအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်နေရ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မတူကွဲပြားမှုတွေကို ပေါင်းစည်းပြီး အင်အားအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်နေရ
epa06520341 Myanmar President Htin Kyaw (R) talks with State Counselor Aung San Suu Kyi (L) as they pose for the group photo after the Ceremony for Signing the National Wide Ceasefire Agreement at Myanmar International Convention Center (MICC) in Naypyitaw, Myanmar, 13 February 2018. The New Mon State Party (NMSP) and Lahu Democratic Union (LDU) signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA). EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING
မတူကွဲပြားမှုတွေကို ပေါင်းစည်းပြီး အင်အားအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်နေရ
မတူကွဲပြားမှုတွေကို ပေါင်းစည်းပြီး အင်အားအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ MICC II မှာပြုလုပ်တဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ အခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အလယ်မှာ ဖိအားပေါင်းများစွာ၊ ဝေဖန်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသလို ပြည်တွင်းမှာလည်း သဘောထားကွဲလွဲမှု တွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မတူကှဲပွားမှုတှကေို ပေါငျးစညျးပွီး အငျအားအဖွဈ မပွောငျးလဲနိုငျခဲ့တဲ့ ဆိုးကြိုးတှေ ရငျဆိုငျနရေ
မတူကှဲပွားမှုတှကေို ပေါငျးစညျးပွီး အငျအားအဖွဈ မပွောငျးလဲနိုငျခဲ့တဲ့ ဆိုးကြိုးတှကေို ရငျဆိုငျ ကွုံတှနေ့ရေတယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁၃ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောရှိ MICC II မှာပွုလုပျတဲ့ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ NCA လကျမှတျရေးထိုးတဲ့ အခမျးအနားမှာ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောကွားလိုကျ တာပါ။
ဒီလိုပွောကွားရာမှာတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ နိုငျငံတကာရဲ့ အလယျမှာ ဖိအားပေါငျးမြားစှာ၊ ဝဖေနျမှုပေါငျးမြားစှာနဲ့ ရငျဆိုငျနရေသလို ပွညျတှငျးမှာလညျး သဘောထားကှဲလှဲမှု တှနေဲ့ အငွငျးပှားမှုတှေ ဖွဈပျေါနတေယျလို့လညျး ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Previous articleတိုင်းရင်းသား ၂ ဖွဲ့ NCA မှာ ပါဝင်လာတဲ့အပေါ် အမေရိကန်ကြိုဆို
Next article၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို သားမယားပြုကျင့် မရလို့ သတ်ဖြတ်